I-Ghost shark: iimpawu, ukondla nokuzala | Ngeentlanzi
Enye yeentlanzi ezinomdla kwaye eziyimfihlakalo ezikhoyo ngaselwandle ukrebe wesiporho. Le yenye yezona ntlobo zibalaseleyo zookrebe ekuthabatha umgudu omkhulu ukuzibona nokwazi ngazo. Luhlobo lukakrebe olungaziwa kangako nolusaphandwa nanamhlanje.
Kweli nqaku siza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi malunga noshaka wesiporho kunye nento eyaziwayo malunga nokuziphatha kwayo kunye namasiko.
3 Ukutyisa ookrebe
4 Ukuzaliswa kwakhona kwespirit shark
Luhlobo lokrebe olwaziwa kakhulu ngegama leWounded Kim. Yeyosapho lakwaChimaeridae kunye nohlobo lweHydrolagus. Banamagama aqhelekileyo kwezinye iindawo zehlabathi njengoko benikwa amagama afana nokubonakala kwabo. Njengokuba, singalifumana igama le-chimera eblowu ngeempumlo ezichaziweyo Oko kubhekisa kubume bayo. Kungenxa yomyalelo weentlanzi zentlanzi.
Luhlobo olukho kwiplanethi yethu ngaphezulu kweminyaka engama-300 ezigidi. Ingathi ngumzekelo wedayinaso osaphila nanamhlanje. Ukubonakala kolu hlobo kuyamangalisa ngokwenene. Intloko yayo yenziwe ngento engathi ziipleyiti zentsimbi. Inika imvakalelo ngokungathi unezinto ezithile zentsimbi entlokweni yakho kwaye inika inkangeleko ngokungathi uneziva ezininzi kulo lonke eli candelo.
Ungamjonga emehlweni kwaye ubone ukuba abaphili. Banamehlo anombala ongaqhelekanga kwaye abanamazinyo makhulu kunye nembonakalo eyoyikisayo njengoko kuhlala kusenzeka kwezinye iintlobo zikakrebe. Ngokuhlaza la mazinyo aneentsila zamathambo ezinomsila ezikwaziyo ukwahlula ukutya kwazo.
Ukubonakala kolu hlobo ukuba kwavela iminyaka engama-300 yezigidi eyadlulayo iyamangalisa ngokwenene: ukuba sijonga entlokweni yayo, kubonakala ngathi yenziwe ngamacwecwe esinyithi, anika imvakalelo yokudityaniswa kunye ngenxa yokuvela kweempawu ezininzi eziboniswayo. Amehlo alo abonakala eswele ubomi ngenxa yombala wawo kwaye awanamazinyo ayoyikekayo njengamanye ohlobo lwawo, kodwa endaweni yoko anamacwecwe angamathambo anokukwazi ukutyumza ukutya kwawo.
Olunye lweempawu zalo eziphambili zokuba luphawu olunjani lombala onamandla ophakathi kohlaza okwesibhakabhaka nomhlophe. Kungenxa yalo mbala ukuba bandibiza ngokuba ngushaka wesiporho. Kungenxa yokuba ifana nesiporho sokwenene esingaphantsi kwamanzi. Iimpumlo zikhombe kwaye iinkunzi zinamalungu okuzala entloko. Ilungu lokuzala elinokurhoxiswa. Kukho uphando olwahlukeneyo lwezenzululwazi kwezi krebe apho iisampulu ezafika zifile elunxwemeni zaphandwa.
I-ghost shark inoluhlu olubanzi ngokufanelekileyo. Bahlala bephuhlisa kwaye behlala ezinzulwini kufutshane ne-2000 yeemitha kwaye, ngesantya esiphezulu kakhulu, kunzima kubo ukuba bakwazi ukusinika intshukumo. Enkosi kwinto yokuba ngo-2009 indlela yakhe yokuziphatha yaqala ukutshintsha, Kwaqwalaselwa kakuhle kwiiHawaii Islands nakwiCalifornia enkosi kwinto yokuba yaqala ukubonwa kubunzulu obungaqhelekanga. Iimpawu zingafumaneka kubunzulu beemitha ezingama-600 kuphela. La maphepha mancinci ngumsebenzi wokuhlalutya.
Singatsho ukuba indawo yokuhambisa indalo imi ngakuLwandle iTasman. Kule ndawo, ininzi kakhulu phakathi kwempuma esezantsi kunye neziko loLwandlekazi lwePasifiki. Phakathi kweendlela zayo zokuziphatha sifumanisa ukuba iyatyibilika kuba inesantya esikhulu sokuhamba. Bahlala bedada kubunzulu phakathi kwe-1000 kunye ne-2000 yeemitha, ke kunzima ukubalandela.
Olu hlobo lukakrebe lutya kakhulu ukutya okutyayo. Akunakwenzeka ukuba wazi kakuhle ngokweenkcukacha ukuba loluphi uhlobo lokutya. Oku kungenxa yento esele siyikhankanyile ngasentla. Phakathi kobunzulu obukhulu apho iqhutywa khona rhoqo kunye nesantya ehamba ngaso, benza uphando ngokutya okuntsonkothileyo kwaye kuyabiza.
Kuqikelelwa ukuba ukutya kwabo Iqukethe ii-crustaceans kunye neentlanzi ezincinci, nangona ingaqinisekiswanga ngokupheleleyo. Akukho lwazi lungako lwesayensi malunga nokutya kwakho.
Ukuzaliswa kwakhona kwespirit shark
Ngokumalunga nokuzala kwayo, olu hlobo lukakrebe lunokuveliswa kwe-oviparous. Oko kukuthi, ivelisa kwakhona ngamaqanda. Ukuvelisa kwakhona kuqala xa kufikelela kwinqanaba kunye nenqanaba lokukhula kwabantu abadala. Ngokwesiqhelo, Eli nqanaba lifika xa lingaphezulu kweesentimitha ezingama-55 ubude. Azikho zonke iinkcukacha zokuveliswa kwakhona okwaziwayo, kuba esi silwanyana asikaze sifundwe ngokupheleleyo. Into eyaziwayo kukuba kwenzekile ukuba ezi zilwanyana zifunyanwe phakathi kokukopisha kwaye kuphela kwento eyaziwayo.
Kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba ukuze ube nayo yonke idatha yolu hlobo, kukho kuphela 2 okanye 3 ukubonwa kwesiporho ngonyaka. Uninzi lwezi zinto lubonwayo zenziwa kwiindidi ezizodwa ezingekho ngababini okanye amaqela ookrebe abahamba kunye.
Ngaba namhlanje, i-ghost shark idweliswe njengendidi yenkxalabo encinci ngenxa yokuba kunzima ukuyifumana. Oku kuthetha ukuba ifuthe koluhlobo lincinci. Kuyinyani ukuba enye yeempembelelo ezingqalileyo zabantu kolu didi kukulawulwa okungalawulwayo kokuloba. Ngenxa yolu hlobo lwezixhobo zokuloba, uninzi lweesampulu zibanjiwe ngokwenza ukuba abantu bakholelwe kwaye babekhona kwesi silwanyana. Baye basindiswa kwimpembelelo yabantu ngenxa yobunzulu bendawo abahlala kuyo.
Njengoko ubona, iintlobo ezibonakala ngathi ziyintsomi zihlala elwandle. Ndiyathemba ukuba olu lwazi ungafunda ngakumbi malunga noshaka wesiporho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Ukrebe womoya